🥇Best Forex Indicators for Trading March 2021 - Pros & Cons Uncovered
Inwe ihe ịga nke ọma mgbe ị na-azụ ahịa azụmaahịa nwere ike isi ike ịga, mana nke ahụ anaghị egbochi ọtụtụ nde anyị ịnwe mgbape na ya kwa ụbọchị - ụfọdụ na-enwe mmeri karịa ndị ọzọ.
Obi dị anyị ụtọ na e nwere ọtụtụ ngwaọrụ iji duzie anyị n'ime mkpebi ndị siri ike dị otú ahụ. Mmasị nke ndị na-egosi na eserese na-eme ka a mata nghọta dị oke ọnụ ahịa Forex, mmetụta ahịa na akụkọ ọnụahịa.
Dị ka ị nwere ike iche n'echiche - ịnweta ụdị ozi bara uru ma dị omimi na-enye ndị ahịa n'ime ihe ọmụma ma a bịa n'echiche nke ahịa sara mbara.
Otu n'ime ngwa ọrụ ndị kachasị ewu ewu bụ ihe ngosi Forex, nke enwere ọtụtụ ụdị dị iche iche. N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị na-agba ọsọ site na 10 kacha mma Forex Forex egosi dị na otu ị nwere ike isi jiri ha mee ihe ị na-azụ ahịa na ọkwa ọzọ.
Gịnị bụ Forex egosi?
Ọbụna tupu i chee echiche banyere ịzụ ahịa azụmaahịa n'ịntanetị, ịkwesịrị ịgbakwunye ihe kachasị mma na atụmatụ gị.
Kedu ihe bụ ihe ngosipụta ihu igwe? Ngosiputa, ihe ngosi bu uzo buru ibu nke nyocha oru, nke ndi ahia n'uwa nile iji nyere aka na mkpebi.
Mgbe ị na-etinye ndị na-egosi na usoro azụmaahịa gị, ị na-enyocha ozi gbasara oge gara aga na ugbu a. You ga - ahụta ihe ngosi a na egosi dị ka 'lagging' na 'eduga'.
Dị ka anyị kwuru, ndị kasị mma Forex egosi hụ na ahịa nwere ikike inyocha ihe ọmụma dị ka; arụmọrụ nke ahịa, akụkọ ihe mere eme, data ọnụahịa ugbu a, mmetụta uche ahịa, na olu.
Na mkpokọta, nyocha teknụzụ n'ozuzu ya bụ akụkụ bụ isi nke azụmaahịa azụmaahịa na-aga nke ọma. Yabụ, maka nghọta, isi ihe nyocha ndị ọrụ dị ka ndị a:
Oge / olu na-egosi
Nkwado na nguzogide
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere enyemaka dị ukwuu nye ndị ahịa. Ihe ngosi kachasị mma bụ isi ihe dị mkpa maka ịkọwa echiche ahịa, n'etiti ihe ndị ọzọ, nke ịzụ ahịa ego mba ọzọ.
Site n'iji ihe ngosi ntanetị dị na mkpịsị aka gị, ị ga-enwe ohere ka mma iji nwee ọganihu azụmaahịa na-aga nke ọma. Ọzọkwa, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ahịa nwere ahụmahụ na-a swearụ iyi site n'inwe atụmatụ ịzụ ahịa siri ike n'azụ ha.
N’uzo di nkpa, imu ka esi egosi oru ugbu a bụ dị mma ebe a na-amalite dị ka ọ bụla. Nke a na-ewetara anyị nwayọ na ihe ngosi 10 kachasị mma - ihe niile ị nwere ike itinye na atụmatụ azụmaahịa gị.
1 - Isiokwu Ike Ikwu (RSI)
Malite na Ndekọ Ike Ike - nke a na-akpọkarị RSI maka mkpụmkpụ - akara ngosi a bụ ụdị nyocha ọrụ ama ama nke ndị ahịa ụwa na-eji.
Maka ndị na-amaghị, a na-ahazi RSI dị ka oscillator na ọ bụ otu n'ime ọnọdụ kachasị mma na-egosi ngwaọrụ na ndepụta anyị. Ndị ahịa na-eji RSI eme ihe maka ikpughe ngwa ngwa, na-egosi mgbe ihe onwunwe dị na nnukwu ụlọikwuu ma ọ bụ na-atụgharị uche.
Nke a oscillator bụkwa ihe magburu onwe na atụ nke zoro ezo na doro anya divergence n'ókè na Forex ahịa.
Na a nutshell, na RSI bụ quantification nke abaghị uru emechi uru na mmekọrita na uru mmechi mmechi - egosiri dị ka pasent nke ga-agbanwe n'etiti 0 na 100.
Ngụkọta oge dị ka nke a:
Anyị kwuru na RSI na-egosi oke ọkụ na ahịa ego, yabụ a na-eji ihe ngosi nke ụdị a gbakọọ ọsọ nke mgbanwe ọnụahịa Forex.
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ihe ndị a na-egosi ọsọ ọsọ na-egosi ọ̀tụ̀tụ̀ dị mkpirikpi. N'igosipụta ogologo oge na ahụike zuru oke nke mgbanwe ọnụahịa ndị a ekwuputara - nke a bụ mgbe emepụtara akara 'oversold' na 'overbought'.
Dịka e kwuru, RSI gosipụtara uru dị n'etiti 0 na 100 nke na-agagharị na mgbanwe ọnụego.
Lee n'okpuru maka nkọwa na abụọ:
Ọ bụrụ na ịgụ RSI karịrị 70 - nke a na-egosi na nchekwa dị overboka n'ókèala.
Ọ bụrụ na ịgụ RSI dị n'okpuru 30 - nke a na-egosi na nchekwa dị oversold n'ókèala.
Yabụ, kedu ihe ọ bụ overboka mgbaàmà na gịnị kpatara o ji baa uru? Ihe mgbaàmà na-egosi gị na otu ụzọ Forex ị nwere mmasị na ya dị oke ọnụ.
Nke a na - esochikarị oge oge akụnụba enwetarala ije ije elu. Dị ka ọ dị ka ị maara, ọnụahịa enweghị ike ịga n'ihu n'otu ụzọ ahụ ogologo oge n'emeghị ntụgharị.
Dị ka nke a, RSI na-enye gị ohere ka mma ịkọ mgbe mgbanwe nwere ike ime. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na RSI agafeela 70, nke a nwere ike igosi na nkwụsị ahịa dị nso.
Ergo, ọ bụrụ na ịkọwapụta usoro a na-eme dị ka ihe ịrịba ama na ntụgharị na-abịa - ị nwere ike ịhọrọ ere kpọchie ya na uru gị
Ọ bụrụ n ’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị hụ otu oversold mgbaàmà, ndị na-abụghị yiri ka ọ ga-eme. Nke a nwere ike inye gị ihe ngosi na ị kwesịrị 'ịga ogologo'.
2 - Nkezi Ntugharị (MA)
Forex trading, ọkachasị n’oge dị mkpirikpi, na-agụnye ịgbaso usoro ọnụahịa kacha ọhụrụ.
Nkezi Na-agagharị (MA) bụ otu n'ime ihe ngosi kacha mma dị ka ọ na-amata usoro nke ọnụahịa - ebe ọ na-ebepụkwa mkpọtụ mkpọtụ nke mgbanwe mgbanwe oge dị mkpirikpi.
Chọpụta MA nwere ike inyere gị aka nke ukwuu ikpughe usoro ọ bụla dị ugbu a yana ịpụta. Ọnụ ọgụgụ na-agagharị agagharị na-achọkarị nkezi site na iji usoro mgbakọ na mwepụ wee jiri data chọpụta ọnọdụ.
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe:
MA na-egosipụta ọnọdụ ndị a kpọtụrụ aha na ọnụego ọnụahịa - yana ọkwa price edinam site na igbutu nnyonye anya nke nkpirikpi oge nkpuru ugwo.
Imirikiti ndị ahịa azụmaahịa na-eji ọtụtụ oge oge mgbe ha na-ebute ọkara na-akpụ akpụ. Mkpụrụ osisi na-akpụ akpụ na-ewu ewu kachasị ewu ewu na-abụkarị nkezi 50, 100, na ụbọchị 200.
Agbanyeghi na MA bu ezigbo ihe nyocha nke oma - o doro anya na obu otu n'ime ihe omuma kachasi nma, kariri n'ihi idi mfe.
Ọzọkwa, enwere ike ịhazi akara ngosi na-agagharị na oge ọ bụla. Nke a na - enyere gị aka ọ bụghị naanị ịlele ọnọdụ kamakwa ị ga - enwerịrị nghọta banyere ụzọ ebumnuche nke akụ na - aga na ọnụ ahịa ahịa ndị ahịa.
Mgbe enwere ihu ala, MA nwere ike ịrụ dị ka ụlọ, ma ọ bụ 'iguzogide' ya mere. N'aka nke ọzọ, n'etiti ọnọdụ na-arị elu, nkezi na-arụ ọrụ dị ka 'nkwado', ma ọ bụ isi.
Anyị kwesịrị iburu n'uche na n'ihi eziokwu ahụ enwere ike ịgbakọ MA maka oge ọ bụla, ị ga-enwe ike iji ya mee ihe iji kọwaa usoro ọhụụ na ogologo oge.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgbakọ MA n'onwe gị, gbakwunye ọnụ ọgụgụ ọnụọgụ wee kewaa ọnụọgụ ahụ site na ụkpụrụ dị iche iche.
Iji dokwuo anya:
Kwuo na ịchọrọ ị gbakọọ ọnụọgụ nke oge 2
Tinye ọnụ ọgụgụ niile n'ogologo oge
Kewaa ngụkọta ọnụ ọgụgụ abụọ
N'iji otutu ihe ntinye data, MA choputara onu ogugu, ma nke kachasi nke a nwere ike iji ya na nyocha nke chart.
Ka anyị metụrụ aka, akara ngosi a bụ ngwa ọrụ aka iji chọpụta ọkwa nke nguzogide na nkwado. E nwere ụdị MA abụọ abụọ na-ebute ụzọ ma ha bụ 'ọnụọgụ na-agagharị agagharị' (SMA) na 'ọnụọgụ na-agagharị agagharị' (EMA).
SMA na-enye ozi gbasara ụkpụrụ niile, nke ikpeazụ na-etinyekwa uche na ọnụahịa ndị na-adịbeghị anya - nke anyị na-ekwu maka ya n'ụzọ zuru ezu n'oge na-adịghị anya.
3 - Ntughari ntụgharị nke ntụgharị (MACD)
MACD bụ ngwaọrụ ọzọ a ma ama na ndepụta njirimara kachasị mma. Ntucha a na-agbanwe n'ike n'ike nke a na-enweta site na iji atụnyere site na nkezi 2 na-akpụ akpụ.
Site na ịgbakwunye akara ngosi a na usoro ịzụ ahịa gị, ị ga-enwe ike ịmata ohere ịzụ ahịa ahịa bara uru gbara gburugburu nguzogide na nkwado.
Maka ndị na-amaghị, 'ntụgharị' na-egosi na ọnụọgụ abụọ na-agagharị agagharị na ibe ha. Ebe 'nmekọrịta' na-egosi na ha na-agagharị ibe ha.
Lego nkowa di mfe banyere otu esi eme MACD:
Ihe mgbaàmà: Akara a gosipụtara ngbanwe na ọnụahịa ọnụahịa, ma na-emekwa dị ka ihe na-akpalite - na usoro ire na ịzụta akara. Akara ngosi bụ 9-oge MA nke MACD
Usoro MACD: Nke a akara na-agbakọ ọdịiche dị n'etiti nkezi abụọ na-agagharị agagharị. E guzobere akara MACD site na iwepu oge 2-oge MA, site na uru nke oge 26 MA.
Ihe omuma: Ahịrị a na-agbakọ ihe dị iche n'etiti akara mgbaama na MACD
Dịka ị pụrụ ịhụ, anyị kpọtụrụ aha ihe atọ dị n'elu - agbanyeghị, ọ bụ naanị akara mgbaama na akara MACD ka agbakọ MACD.
E gosipụtara MACD dị ka ihe a na-akpọ 'histogram'. Ga-ahụ ọdịiche dị n'etiti akara na akara MACD, n'ụdị eserese.
Enwere ike iwere ya dika ere gosipụta ma ọ bụrụ na MACD agbaji akara akara site n'elu. Ọ bụrụ n ’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na o si na okpu daa, ị nwere ike iji nke ahụ ịzụta mgbaàmà.
Ihe ngosi akara ngosi a dị mfe ma nwee ntụkwasị obi. Ọbụghị naanị na ị nwere ike ilele ịdị ike na mgbanwe mgbanwe nke omume a - kamakwa etu esi ere na ịzụta akara dị ike.
Nke a na - eme ka MACD bụrụ otu n’ime ihe ngosipụta kachasị mma maka ndị ahịa nke ọkwa niile ọkachamara ma a bịa n’ihe atụ dị ugbu a banyere mmetụta ahịa.
4 - Ngosipụta Na-agagharị Na-agagharị (EMA)
Dịka anyị kwuburu na mbụ, MA na-enye aka maka ịchọpụta ọnọdụ - agbanyeghị, ihe ngosi a na-elekwasị anya karịa -adịbeghị anya data ọnụahịa. Ka o siri dị, ụfọdụ ndị na-akpọ EMA 'nke ukwuu dara nha na-agagharị nkezi '.
Na obere oge, ihe ngosi EMA a na-ejikarị eme ihe ga-adị n'etiti 12 na 26-ụbọchị, ma ọ bụ na obere oge 5-20 nkeji.
Mgbe ị na-ahọrọ atụmatụ ogologo oge, ndị ahịa na-ejikarị ihe ngosi 50 na 200 ụbọchị.
N'ụzọ dị oke mkpa, ịnwere ike iji EMA n'akụkụ ụfọdụ ihe ngosi ndị ọzọ na ndepụta akara ngosi kachasị mma anyị iji nyochaa ọmarịcha ahịa ahịa ma tụọ ịdị mma ha.
5 - Bollinger Bands
Bollinger Bands bụ otu n'ime ihe ngosi kachasị mma maka iji gosipụta ọnụọgụ ego nke akụnụba na-azụ ahịa n'ime. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ihe ngosi a bụ eserese mgbakọ na mwepụ nke na-egosi volatility na ahịa nke otu Forex oge karịa oge
N'ịbịaru 'bands' ahụ nso, ibelata ụda nke ngwa a. Ergo, ka ndị otu a na - anọghị ibe ha, ọ ga - abụ na ọ ga - abawanye.
Ọ bụrụ na a Forex ụzọ is ere ahia n'èzí nke ọkwa 'nkezi' ya - Bollinger Bands ga-egosi gị nke a. Nke a bara uru karịsịa maka ịnwa ịkọ nkọ banyere mgbanwe ọnụahịa na ogologo oge.
Ọ bụrụ na ọnụahịa na-agbanwe ugboro ugboro karịa otu kachasị elu - nke a na-egosi na akụnụba ego nwere ike ịdị n'ogige 'overbought'. Ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ n’onwe ya n’okpuru mmachi - nke a na-egosi na ọ nwere ike ịbụ n’ogige ‘oversold’.
Inwe ngwaọrụ dị iche iche iji nwee ike ịhụ ihe nwere ike ịba ụba ma ọ bụ buru ibu bara nnukwu uru maka ịkọ mgbe ole ịbanye ma ọ bụ pụọ na ahịa.
6 - Ichimoku Igwe ojii
Ka anyị kwuo na ị na-achọ ịmụ ọnụahịa akụkọ ihe mere eme, yana omume ọnụahịa ugbu a, na-ewepụ iche ahịa dị elu. N'okwu ahụ, Ichimoku Cloud nwere ike ịbụ otu n'ime akara ngosi kachasị mma maka ọrụ ahụ.
Dị nnọọ ka ụfọdụ ihe ngosi ndị ọzọ dị na ndepụta anyị, Ichimoku Cloud na-egosipụta nguzogide na nkwado nkwado maka ndị ahịa azụmaahịa.
Agbanyeghị, n'ụzọ dị iche, ọ na-enyocha ọnụahịa ego, na-esote Forex n'ókè iji nyere gị aka n'ime mkpebi. Ndị ahịa na-enwe mmasị na eserese juru na ntụhie na ozi na-enuga na akara ngosi a.
N'ụzọ na-akpali mmasị, na Japanese 'Ichimoku Kinko Hyo' na-asụgharị na 'eserese nhazi otu', ebe ọ na-enye ọtụtụ ozi n'otu ebe.
Ngosipụta ahụ na-ebu amụma nguzogide na nkwado nke ugbu a na ọdịnihu, yana ịchọpụta usoro ahịa na ntụzịaka ha nwere ike ịbanye.
Ikpocha alụlụ, ị ga-ahụ n'okpuru mmebi nke ihe ngosi 5 Ichimoku Cloud egosi bụ:
Senkou Span A: Akara a na-acha odo odo ma na-akpọ ya 'na-eduga ogologo A'. Na-eduga n'ogologo A ma bụrụ ebe dị n'etiti Kijun Sen na Tenkan Sen. A na-atụzi ahịrị ahịrị 26 n'ihu oge ma gbakọọ - Kijun Sen tinyere Tenkan Sen, nke nke abụọ kewara.
Senkou Span B: Akara a na-achakarị acha anụnụ anụnụ ma kpọọ ya 'na-eduga ogologo B'. Ogologo oge B bụ ọkara na-agagharị agagharị nke etiti oge site na oge 52 gara aga. A na-eme ahịrị ahịrị 26 aga n'ihu. Ngụkọta oge na-aga - 52-oge elu plus 52-oge ala, kere 2.
Tenkan-sen: Nke a na akara na-abụkarị agba uhie ma kpọọ ya 'ntụgharị ntụgharị'. A na-akpa Tenkan-sen dị ka ọkara na-agagharị n'okporo ụzọ nke oge 9 gara aga
Kijun-sen: Akara a na - achakarị ọcha na agba ma kpọọ ya 'ntọala'. A na-eme atụmatụ Kijun-sen dị ka ọnụọgụ nke midway nke oge 26 gara aga
Oge Chikou: Akara a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba ma na-akpọkarị 'lagging span'. Kere oge 26 gara aga - oge ị ga - emepụta atụmatụ nke 'igwe ojii'. Ọ bụrụ na senkou span B dị n'okpuru Span A igwe ojii ga-acha akwụkwọ ndụ na agba. Ọ bụrụ na A dị n'elu B igwe ojii na-acha uhie uhie na agba.
Dị ka ọ pụtara site n'elu, site n'ịgụ Ichimoku Cloud egosi na ị nwere ike nyochaa 'ihu igwe' nke ahịa.
Iji mee ka ọ dịkwuo mfe:
Ọ bụrụ na igwe ojii na-acha ọbara ọbara ọ ga-abụ na e nwere beish emekarị.
Igwe ojii na-acha akwụkwọ ndụ na-egosi ihe a bullish emekarị.
Igwe ojii dị gịrịgịrị na-egosipụtakarị gị na ọnọdụ ugbu a na-ebelata.
Igwe ojii sara mbara karị, usoro ahụ na-esikwu ike.
7 - Oscillator nke Stochastic
A na-ekewa oscillator dị ike dị ka ihe ngosi ọkụ. Ọ na-eweta ntụnyere n'etiti ọnụahịa mmechi ziri ezi na ọnụ ahịa dị elu karịa otu oge.
Anyị na-eche oscillator siri ike bụ otu n'ime ihe ngosipụta kachasị mma maka ọkwa dị oke mma na ịdị mfe.
Nke a bụ ihe ngosi ọzọ na ndepụta anyị nke na-egosi mgbe ihe akụ bara n'ime oke 'oke' ma ọ bụ 'overold'.
Ọ bụrụ n ’ịgụ ihe karịrị iri asatọ ị na - ele anya n’ahịa na - ada n’ime overboka udi. Ọ bụrụ na ọgụgụ ahụ erughị 20 - nke a na-egosi ihe oversold ahịa.
Rịba ama, ọ bụrụ na omume ahụ yiri ka ọ siri ike n'ezie, ọ pụtaghị na mgbazi ahịa na-abịa nke ọma wee jiri nlezianya na-azọ. Ọzọkwa, nke a bụ ihe mere ị ga-eji jikọta ọtụtụ akara ngosi ọnụ iji kwado ihe ị chọpụtara.
Ka o sina dị, oscillator na-ere ahịa na-enye ezigbo ike ịzụta ma ree akara, nke bara uru nke ukwuu mgbe ị na-azụ ahịa azụmaahịa. Ihe ngosi akara ngosi na-arụ ọrụ nke ọma n'akụkụ RSI.
8 - Fibonacci Retracement
The Fibonacci retracement na-eme ka anyị kacha mma Forex egosi ndepụta n'ihi na ọ na-enyere ndị ahịa gbakọọ ahịa 'pullbacks' (ma ọ bụ nwa oge kwụsịtụrụ na a na-emekarị).
Pullbacks na -emepụta ohere ịzụ maka ndị ahịa na-achọ ịgbago elu. N'ikpeazụ, Fibonacci bụ ihe osise ịbịaru na-enyere gị aka ịlele mgbanwe ọ bụla na ahịa.
Enwere ike iji akara ngosi ngosi a n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche ị ga-esi na-eme ihe, na-enweta site na iji ọkwa dị iche iche. Ọkwa ọ bụla na-atụle ọnụọgụ na pasent pasent nke ahịa tụgharịrị n’agbata 2 isi dị iche iche.
Ihe ngosi egosi na-abụkarị ndị a:
N'etiti 23.6% na 38.2% maka 'retracement na-emighị emi' - na-egosi ngwa ngwa ngwa ngwa ma sie ike
N'etiti 61.8% na 78.6% maka 'omimi miri emi' - ahịa siri ike na-agbanwe agbanwe, n'agbanyeghị na ọ nwere obere ọsọ karịa ntụgharị ala miri emi.
Enwere ike iji Fibonacci retracement n'etiti isi ọnụ ahịa abụọ dị mkpa - dị ka nke dị elu na nke dị ala - na-akpụ usoro n'etiti etiti 2.
A na-atụ aro ka ịmepụta usoro nkwụsị-ọnwụ n'okpuru ọnụahịa gara aga na-agbanwe ala nke usoro elu - na elu karịa ọnụahịa gara aga na-agbanwe elu nke usoro ọdịda.
Mgbe ọ dị ka ọ ga - abụ ihu elu ị ga - enwe ike iji Fibonacci retracement iji lelee ole nke nnukwu mgbakọ ikpeazụ a hapụrụ.
N'ihe niile, Fibonacci retracement bụ otu n'ime ihe ngosi kachasị mma maka ịmata mgbe ole ịbanye n'ahịa. Ga-enwe nghọta ka mma banyere ebe dị mma iji tinye 'nkwụsị-ọnwụ' na iwu 'nweta-uru'.
9 - Ntinye Nkezi Ntugharị (ADX)
Nkezi Nduzi Nduzi, ma ọ bụ ADX, bụ ngwá ọrụ ọzọ nke ọtụtụ ndị na-azụ ahịa azụmaahịa na-eji eme ka ike dị otu ụdị nwee ike.
Otu n'ime ihe kachasị sie ike banyere azụmaahịa azụmaahịa, ma ọ bụ akụ ọ bụla, na-ebu amụma ziri ezi na usoro nke omume. ADX gosipụtara ihe ngosi 3 gụnyere ADX (nwa), Positive (green), na Negative (red) Directional Indicators.
Akụkụ nduzi na-adịghị mma na nke adịghị mma nke ngwá ọrụ a na-egosi ma omume adịghị ike ma ọ bụ dị ike. ADX sitere na 0 gaa na 100. Ihe ọ bụla karịrị 25 na-egosi na ọ ga-esiwanye ike na-aga n'ihu.
Dabere na nkezi na-agagharị, ma na-agbasapụ karịa oge 14, ADX na-etinye uche na ike nke usoro - na-emegide ntụzịaka ya. Ọ bụrụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (ezigbo ntụziaka) dị n'elu uhie (ntụziaka na-adịghị mma) - ọ ga-abụ na omume ahụ dị ike.
Kwesighi ịtọ ADX ka ọ bụrụ oge 14, n'ihi na enwere ike ịmegharị chaatị iji nyekwuo ma ọ bụ obere na usoro ọnụahịa.
10 - Ntughari nke oma (SD)
Dekpụrụ dị iche bụ ngụkọta mgbasa. Ngwaọrụ mere ndepụta anyị nke 10 kacha mma Forex egosi n'ụzọ dị ukwuu n'ihi na mgbe ejiri ya na ndị ọzọ na-egosi, ọ nwere ike inyere ndị ahịa aka ịme nhọrọ ka mma.
Ihe nyocha a nke ihe omuma a na-acho onu ahia nke ahia, anyi chere na o kwesiri itinye ya na uzo ahia gi.
Usoro mgbakọ na mwepụ nke SD ga - eduzi gị na ịbanye n'ahịa na oge kwesịrị ekwesị - ịghara ịkọwapụta ịchọpụta mgbanwe na-agbanwe agbanwe ma guzobe ebumnuche azụmahịa.
Ihe ngosi akara ngosi a dị mfe maka newbies, mana ọ dị ike maka ọkwa nka niile. Standardkpụrụ dị iche iche bụkwa ihe bara uru maka ijikwa ihe egwu / ụgwọ ọrụ gị.
Biko chọta n'okpuru ije ije nke nghazi usoro dị iche:
Chọọ 'pụtara mmechi ọnụahịa' maka oge ị na-ele anya - dịka ọmụmaatụ, oge 20
Chọọ ngbanwe maka oge ọ bụla - nke a bụ uru mmechi na-ewepu ọnụahịa nkezi
Chọọ ebe ahụ maka ọdịiche ọ bụla - wee tinye ihe ndị ahụ dịpụrụ iche
Kewaa ọnụọgụ dị iche site na nchikota enwetara
Na-esote, rụọ SD dị ka mgbọrọgwụ square nke uru enwetara site na nzọụkwụ 4
Dị ka anyị kwuru, ihe ngosi a na-agbakọ etu ọnụ ahịa si akpafu site na nkezi. Banyere nhazi oge, ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ ndabara oge 20 - ị na-anọdụ n'etiti oke.
Na nke ahụ kwuru, ịnwe akara ngosi ihu igwe na-enye ọtụtụ akara nwere ike ịme ka ihe sie ike, ma si otú a metụta uru ị nwere ike ịme.
Esi Mụta Ihe Ngosipụta Forex kacha mma
Ọ bụrụ na ọ na-adị gị ka obere ihe ọmụma ị na-enye na usoro nduzi kachasị mma anyị na-eduzi ruo ugbu a, echegbula.
Maka ọtụtụ nyocha nyocha nke teknụzụ enwere iji nyere ndị ahịa azụmaahịa aka, enwere ọtụtụ narị ndị ebumnuche ndị mbido. Ebumnuche ha niile iji nyere gị aka ịmụta otu esi eji ihe ngosipụta nke ọma.
Anyị edepụtara n'okpuru n'okpuru ụfọdụ mmụọ nsọ, na-ekpuchi ụzọ ụfọdụ ị nwere ike isi kụziere onwe gị ihe ngosi kachasị mma.
Gbalịa ọmụmụ ihe na ntanetị
Enwere usoro ịntanetị na ihe gbasara isiokwu ọ bụla ugbu a. Ihe ngosi ntanetị adịghị iche.
Nwere ike ịnwale usoro ịntanetị kpọmkwem maka akara ngosi Forex ma ọ bụ site na ịme ọchụchọ ịntanetị dị mfe. N’ụzọ dị oke mkpa, ị ga-ahụ ọtụtụ usoro ọmụmụ iji mụta nyocha teknụzụ n’ozuzu ya.
Nke a nwere ike inyere gị aka izere ịmehie otu ihe ahụ dị ka ọtụtụ ndị mbido na mmiri na anya gị.
Ebe a na Mụta 2 Trade, anyị na-enye a dịgasị iche iche nke ọmụmụ Forex, tinyere ihe ngosiputa ahia kachasi elu - juputara na ozi bara uru.
Jiri a ngosipụta Akaụntụ
Ọzọ nhọrọ mgbe ọ na-abịa honing na na nkà gị na Forex egosi bụ ahu nagide free demo akaụntụ.
Maka ndị na-amaghị, ọtụtụ ndị na-ere ahịa ọnlaịnụ n'ịntanetị na-enye ndị ahịa akaụntụ ngosi ego n'efu, jupụta na akwụkwọ ego.
Akaụntụ ngosi ọ bụla na-eicsomi ọnọdụ ọrịre-nke ụwa ma nwee ike ịme ọrụ nyocha teknụzụ gị ruo mgbe ọdịnaya obi gị. Nke kachasị mma bụ na ịkwesighi itinye isi obodo gị n'ihe egwu.
Mgbe oge ruru na ị dị njikere ịmalite azụmaahịa azụmaahịa na ezigbo ego, ịnwere ike ịgbanwe gaa na 'akaụntụ ndụ' n'ụzọ dị mfe.
Site na nke a, o yikarịrị ka ị ga-enwe nghọta miri emi karị banyere otu esi eji akara ngosi kachasị mma maka ọdịmma gị - yana inwe uru doro anya mgbe ị na-eme nhọrọ ịzụ ahịa.
Guo akwukwo mmuta
Anyị niile na-amụta iche iche. Ndị mmadụ dabara n'ụdị 'kinesthetic', nke pụtara na ha mụtara nke ọma site na 'ịme', nwere ike họrọ iji akaụntụ ngosi.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị bụ onye na-amụ asụsụ dị iche iche, ọ ga-aka mma ka ị mụta akara ngosi kachasị mma site n'ịgụ akwụkwọ. E nwere ọtụtụ narị akwụkwọ azụmaahịa azụmaahịa dị na mkpịsị aka gị
Ma ị na-ahọrọ ịgụ akwụkwọ akwụkwọ ọdịnala, dijitalụ, ma ọ bụ akwụkwọ ọdịyo - a ga-enwerịrị akwụkwọ na-atọ gị ụtọ.
Iji nye gị aka aka anyị edepụtara ụfọdụ akwụkwọ kacha mma anyị hụrụ, ha niile na-ekpuchi ihe ngosi Forex na ndị dị otú ahụ:
Nyocha Nka na ụzụ na-eji ọtụtụ oge - nke Brian Shannon
Bollinger na Bollinger Bands - nke John Bollinger dere
Nkọwa nke teknụzụ nke Ahịa Ego - nke John Murphy dere
Forex Maka mmalite - nke Anna Coulling dere
Malite na Nkà na ụzụ - nke Jack Schwager dere
Usoro oriọna nke Japanese nke Kandụl - nke Steve Nison dere
Encyclopedia of Chart Patterns - nke Thomas Bulkowski dere
Akọwapụtara Nka na ụzụ - nke Martin Pring
Dịka ị pụrụ ịhụ, ihe kachasị mma anyị na-egosi na ọ bụghị naanị na e nwere plethora nke akwụkwọ azụmaahịa Forex maka ndị mbido, mana ị nwere ike ịchọta nyocha ọfụma akọwapụtara nke ọma.
Ihe ngosi Forex kacha mma 2021: Echiche Ikpeazụ
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị ekpuchiwo ude nke ihe ọkụkụ mgbe a bịara n'ihe ngosi Forex. Ngwaọrụ ọ bụla ga - eme mgbakwunye nke ọma na atụmatụ azụmaahịa ọ bụla.
Onye ọ bụla nke na-eji akara ngosi Forex eme ihe mgbe niile ga-agwa gị na nyocha ọrụ ntanetị nwere ike iwepụta oge iji weghara. Agbanyeghị, ozugbo ịchọtara ya, ozi ị nwetara bara nnukwu uru.
Ọ bụrụ na ị na-amalite ụwa ahia ma ị maghị ebe ị ga-amalite n'ịmụta ihe ngosi kachasị mma, enwere enyemaka gburugburu gị.
Lelee ya na onye na-ere ahịa na ntanetị ka ị hụ ma ị ga - enweta akaụntụ ngosi ego na - akwụghị ụgwọ, ebe nke a nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji wee nweta - na ọnọdụ ahịa nke na-egosipụta ndụ dị adị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-amụ asụsụ dị iche iche, ịnwere ike ịchọta mkpokọta akwụkwọ agụmakwụkwọ na ntanetị - gụnyere akwụkwọ, gụnyere ihe ọmụmụ anyị Learn 2 Trade forex nke bara oke uru maka ndị ọhụụ. Nke a na-enyere gị aka ịmụta ụdọ site na nkasi obi nke ụlọ gị.
Enwere m ike ịme ihe site na iji akara ngosi n'efu maka n'efu?
Eeh. Ọ bụrụ na nhọrọ ịzụ ahịa gị na-enye ndị ahịa ihe ndekọ ego, ị nwere ike iji ego akwụkwọ na-azụ ahịa na omume na akara ngosi kachasị mma maka n'efu.
Kedu ihe bụ akara ngosi kachasị mma maka ịchọta ọnọdụ?
Mbugharị na-agagharị bụ otu n'ime nhọrọ kachasị ewu ewu maka ndị ahịa azụmaahịa. Ndị ọzọ gụnyere MACD, na Relative Strength Index (RSI),
Enwere m ike ịba ọgaranya site na iji akara ngosi Forex?
Enweghị azịza oji na nke ọcha. Ọ bụ ezie na ndị na-egosi iwu enweghị ike ịme ka ị nweta ego ọ bụla - ịmụ ihe ngosipụta kachasị mma nwere ike meziwanye ohere gị nke inwe ihe ịga nke ọma n'ime mkpebi azụmaahịa ziri ezi.
Enwere m ike ịme ụlọ site na ụlọ iji mụta ihe ngosi kachasị mma?
Ee, ị ga-emeli ya. E nwere ọtụtụ ikpo ntanetị n'ịntanetị maka ndị mbido. N'ebe a na Mụta 2 Trade, anyị nwere ọtụtụ usoro ọmụmụ ịhọrọ site na - yabụ ị ga-amụta site na nkasi obi nke ụlọ gị.
Kedu akwụkwọ agụmakwụkwọ kachasị mma banyere ihe ngosi Forex?
Enwere ọtụtụ akwụkwọ agụmakwụkwọ banyere ihe ngosi Forex. Ọ bụ ezie na ọ bụghị kpọmkwem banyere ihe ngosi, akwụkwọ abụọ kachasị mma banyere nyocha ọrụ aka na azụmaahịa bụ 'Nkọwapụta Nka na Ahịa Ahịa - nke John Murphy' na 'Nkọwapụta Nkọwa kọwara - nke Martin Pring'